Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Nampitandrina ny Amerikanina ny amin'ny fitsangatsanganana rehetra any Russia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Zon'olombelona • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fanoloran-kevitra vaovao momba ny dia any Etazonia, navoaka ny alatsinainy, manome an'i Russia ny fanasokajiana loza mitovy amin'ny Afghanistan, Uganda ary Syria.
Ny olom-pirenena amerikana dia nampitandrina ny tsy handehanana any Russia na amin'ny toe-javatra toy inona
Manoro hevitra manokana ny Amerikanina mba tsy hitsidika ny faritra atsimon'i Rosia toa an'i Chechnya sy i Krimea iadian-kevitra.
Mampitandrina ny manampahefana amerikana amin'ny fitsangatsanganana noho ny “fanorisorenana ataon'ireo tompon'andraikitra misahana ny fiarovana ny governemanta rosiana”.
The Departemantam-panjakana amerikanina Nanoro hevitra ny olom-pirenena amerikana izy mba tsy hankanesana any Rosia na amin'ny toe-javatra inona na inona, nampitandrina fa ny Amerikanina dia mety ho nalaina ankeriny, nosamborina, nampijaliana ary nogadraina noho ny fiampangana trompetra.
Fanoloran-kevitra vaovao momba ny dia any Etazonia, navoaka ny alatsinainy, manome an'i Russia ny fanasokajiana loza mitovy amin'ny Afghanistan, Uganda ary Syria. Ary koa ny fanolorana hevitra manokana momba ny fitsidihana ny faritra atsimon'i Rosia toa an'i Chechnya sy i Krimea iadian-kevitra, ny olom-pirenena amerikana kosa izao dia asaina hisoroka tanteraka an'i Russia.
Ny fanambarana dia mitanisa ny “fampihorohoroana” ho antony iray hialan'ny mpizahatany amerikana an'i Russia.
Ankoatr'izay, ny tompon'andraikitra amerikana dia mampitandrina ny amin'ny dia noho ny “fanorisorenana ataon'ireo tompon'andraikitra fiarovana ny governemanta rosiana” sy ny “fampiharana tsy ara-dalàna ny lalàna eo an-toerana.” Nampitandrina ireo tompon'andraikitra fa nisy “fiampangana diso” natao tamin'ny Amerikanina, ary mety hampidi-doza ireo mpiasam-pivavahana, ary koa ny mpiasan'ny governemanta.
Mandritra izany fotoana izany, ny toro-hevitra vaovao momba ny dia any Washington dia mitanisa ny fahaizany voafetra hanome fanohanana ireo teratany amerikana avy amin'ny masoivohon'i Moskoa. Tamin'ny volana aprily, nanambara ny iraka diplaomatika fa hampihena ny isan'ireo mpiasa ao aminy manodidina ny 75% taorian'ny nandraran'i Rosia azy tsy hampiasa olona ao an-toerana ho anisan'ny didim-panjakana nosoniavin'i Putin ho valin'ny “asa tsy fitiavana”, lalàna napetrak'i Washington.
Vokatr'izany, ny masoivoho amerikana any Russia dia tsy "hanolotra serivisy fanaovan-gazety mahazatra, tatitra momba ny fahaterahana any ivelany, na serivisy fanavaozana pasipaoro ho an'ny ho avy," hoy ny iraky ny maso. Tamin'ny taona 2018, nanakatona ny kaonsiliny tao St Petersburg i Etazonia, ary ny volana desambra lasa teo dia nanidy ny biraony tao amin'ny tanànan'i Ekalinburg Ural sy ny renivohitr'i Vladivostok Far East. Ny fanapaha-kevitra, izay nolazain'i Washington fa ampahany amin'ny fifanolanana amin'ny fisolo tena diplaomatika, dia namela an'i Amerika tsy hanana solontena diplomatika any Rosia ivelan'i Moskoa.